<img src="http://thevoicemyanmar.com/media/30490/conversions/feature_image.jpg" alt="ကျိုက်သလ္လံစေတီတော် လုံးတော်ပြည့်ပြင်ဆင်နိုင်ရန် ကျပ်သန်း ၂၅ဝဝ ကျော်လိုအပ် ">
ကျိုက်သလ္လံစေတီတော် လုံးတော်ပြည့်ပြင်ဆင်နိုင်ရန် ကျပ်သန်း ၂၅ဝဝ ကျော်လိုအပ်
မော်လမြိုင်မြို့ရှိ ကျိုက်သလ္လံစေတီကြီးသည် ပြီးခဲ့သည့်နှစ်အတွင်းက သဘာဝဘေးဒဏ်ကြောင့် ကုန်းတော်နှင့် စေတီပုရဝုဏ်ပျက်စီးခဲ့ရာ စေတီတော်ကြီးကို လုံးတော်ပြည့်ပြန်လည်ပြင်ဆင်နိုင်ရေးအတွက် ကျပ်သန်း ၂၅ဝဝ (၂ ဒသမ ၅ ဘီလီယံ) ကျော် လိုအပ်နေသေးကြောင်း မွန်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ထံမှ သိရသည်။
ရုတ်တရက်ဖြစ်လာတဲ့ အခက်အခဲတွေကို ဖြေရှင်းပေးနိုင်မယ့် အိမ်သုံးပစ္စည်းများ
<img src="https://2.bp.blogspot.com/-3-WP0jvvpmA/XGz93VcurNI/AAAAAAABtOE/xhQfkX-wEdMqSDFvV-2wmabefvmhDImjQCLcBGAs/w1200-h630-p-k-no-nu/a0.jpg" alt="ရုတ်တရက်ဖြစ်လာတဲ့ အခက်အခဲတွေကို ဖြေရှင်းပေးနိုင်မယ့် အိမ်သုံးပစ္စည်းများ">
<img src="https://4.bp.blogspot.com/-eVNlW9TvvB8/XGz91lfOjxI/AAAAAAAB-fE/ak6v5K-9_xkvN6oQnCrtCgbKbBvGMSFFwCLcBGAs/w1200-h630-p-k-no-nu/200219_whalepenis_inquirer.jpg" alt="ဘယ်ယောင်္ကျားလေးမှ ရုန်းမထွက်နိုင်တဲ့ မိန်းကလေး တစ်ယောက်ရဲ့ ဆွဲဆောင်မှု (၈) မျိုး...">
ဘယ်ယောင်္ကျားလေးမှ ရုန်းမထွက်နိုင်တဲ့ မိန်းကလေး တစ်ယောက်ရဲ့ ဆွဲဆောင်မှု (၈) မျိုး...
<img src="https://1.bp.blogspot.com/-R64dd1S0t6Q/XGz6B_5q8-I/AAAAAAAB-e8/D662VxYSYlYgpe7Qsa0U-N1tfyEqW2pwwCLcBGAs/w1200-h630-p-k-no-nu/1-91.jpg" alt="မိန်းမကိုယ် ဘာလို့ယားလဲ…ပျောက်အောင် ဘယ်လိုကုနိုင်မလဲ…">
<img src="https://2.bp.blogspot.com/-dGJJWC4kXb4/XG0DRLjDISI/AAAAAAABtPA/JKrCIBmNoCYCRfkHNCUEGBdjWLVIVQkOwCLcBGAs/w1200-h630-p-k-no-nu/1.jpg" alt="ပက်လက်အိပ်တတ်သူတွေ သိထားရမယ့် အချက် (၄) ချက်">
<img src="https://2.bp.blogspot.com/-3K4R5yC9GOs/XG0CeANBQHI/AAAAAAABtOw/zw6_Y8Z03v42A7UBvJ_ZMY-2Ifm8Vg4TACLcBGAs/w1200-h630-p-k-no-nu/a4.jpg" alt="ညအိပ်မပျော်သူများ ငှက်ပျောသီး ရေနွေး သောက်ပါ">
ညအိပ်မပျော်သူများ ငှက်ပျောသီး ရေနွေး သောက်ပါ
<img src="https://4.bp.blogspot.com/-_lbX81eZ3RY/XG0Ao6zn9PI/AAAAAAABtOk/7iokX4OysAU6H_Op0eyOsLH9Y_ObG-SPgCLcBGAs/w1200-h630-p-k-no-nu/a3.jpg" alt="TV ကြည့်ရင်း အိပ်ပျော်သွားလေ့ရှိတဲ့ သူတွေခံစားရတဲ့ ဆိုးကျိုးများ">
TV ကြည့်ရင်း အိပ်ပျော်သွားလေ့ရှိတဲ့ သူတွေခံစားရတဲ့ ဆိုးကျိုးများ
<img src="https://4.bp.blogspot.com/-a_PqgTcd3UM/XGz4CVbFFlI/AAAAAAAB-e0/D_DeqWM0JN4U9YVLqxXtU4gKXhrEtmu-wCLcBGAs/w1200-h630-p-k-no-nu/00-190.jpg" alt="ကျောက်ကပ် ထိခိုက်စေသော အလေ့အထ (10) မျိုး">
ကျောက်ကပ် ထိခိုက်စေသော အလေ့အထ (10) မျိုး
<img src="https://4.bp.blogspot.com/-iRb0mjjm6wM/XGz9Wqny8sI/AAAAAAABtN0/uAfXwxwUftMv3YOmC_hc7AuA1AvnTsPZACLcBGAs/w1200-h630-p-k-no-nu/8.jpg" alt="သရုပ်ဆောင်ဝေဠုကျော် နှင့် ပထမဆုံး သိကျွမ်းသည့်နေ့၌ ကာမရယူခြင်းခံရသည်ဟု သင်း သင်းဦးရဲ့ ယနေ့ ရုံးချိန်းထွက်ဆိုချက်">
<img src="https://1.bp.blogspot.com/-YmDIz_MWgHg/XGz5bs-FQzI/AAAAAAABtNI/9h11siaAzvE3YQuo1tpzfbZHap7BGnqYQCLcBGAs/w1200-h630-p-k-no-nu/5.jpg" alt="” အခု တမူးမှာ ထီလိမ်ဂိုဏ်းအဖွဲ့မိပြီ ”">
<img src="https://2.bp.blogspot.com/-xBtbyHco9z0/XGz5iM7d8gI/AAAAAAABtNU/ETDHG_mGQdISJbCxykcfTO5rn5kicbWRACLcBGAs/w1200-h630-p-k-no-nu/e.PNG" alt="မျက်မမြင်ဇနီးသည်အတွက် ထောင်ပေါင်းများစွာသောပန်းတွေ စိုက်ပျိုးပေးခဲ့တဲ့ အမျိုးသား">
မျက်မမြင်ဇနီးသည်အတွက် ထောင်ပေါင်းများစွာသောပန်းတွေ စိုက်ပျိုးပေးခဲ့တဲ့ အမျိုးသား
<img src="https://4.bp.blogspot.com/-GjAM2c22WzY/XGz0zoTtxUI/AAAAAAABtMY/fMkSbFUeKTMmMWvVYozBk6INLct5G180gCLcBGAs/w1200-h630-p-k-no-nu/d8.jpg" alt="နမ္မတူ​ချောင်းတွင် ​အရှိန်​လွန်​ကာနစ်​မြုပ်​ခဲ့တဲ့ မော်တော်ယာဉ်မှ ပျောက်ဆုံးနေသော ယာဉ်မောင်းအား ဆယ်ယူပေးခဲ့ ဝေဠုကျော်အဖွဲ့သားများ">
<img src="https://1.bp.blogspot.com/-YktlBhcG-Vs/XGz-wfdWbUI/AAAAAAABtOY/zR7uuLhGmHQtYdS4Q2Q7UOk_M1ffO1r1wCLcBGAs/w1200-h630-p-k-no-nu/9.jpg" alt="တစ်နာရီမိုင်သုံးသောင်းနှုန်းနဲ့ ကမ္ဘာနားကနေ ဖြတ်ပျံသွားတဲ့ ဥက္ကာခဲကြီး">
တစ်နာရီမိုင်သုံးသောင်းနှုန်းနဲ့ ကမ္ဘာနားကနေ ဖြတ်ပျံသွားတဲ့ ဥက္ကာခဲကြီး
<img src="https://3.bp.blogspot.com/-z7Q2Xm0A_eU/XGz2uR0A6qI/AAAAAAABtM4/wzwhYClnE40vTT6rlFa-72wq-T_AzckmACLcBGAs/w1200-h630-p-k-no-nu/2.jpg" alt="ဧရာဝတီတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်နှင့် ဇေကမ္ဘာဦးခင်ရွှေတို့ ဟိုင်းကြီးကျွန်းတွင် နဂါးစာကျွေး">
<img src="https://1.bp.blogspot.com/-fE2ZxA7tA1E/XG0B-rxh-XI/AAAAAAAB-fM/ZDAHcG8nBiYxfD_iDfgT9a_h2wjiPglpgCLcBGAs/w1200-h630-p-k-no-nu/00-190.jpg" alt="ကိုယ်ပိုင်အထက်တန်းကျောင်းပိုင်ရှင်က အသက်မပြည့်သေးသူကို မုဒိမ်းမှုကျူးလွန်သည့်အမှု အမှန်တရားပေါ်ပေါက်ရန် နစ်နာသူမိသားစုဝင်များတောင်းဆို">
ကိုယ်ပိုင်အထက်တန်းကျောင်းပိုင်ရှင်က အသက်မပြည့်သေးသူကို မုဒိမ်းမှုကျူးလွန်သည့်အမှု အမှန်တရားပေါ်ပေါက်ရန် နစ်နာသူမိသားစုဝင်များတောင်းဆို
<img src="http://thevoicemyanmar.com/media/30489/conversions/feature_image.jpg" alt="ကုန်ပစ္စည်းများတွင် မြန်မာဘာသာဖြင့် ဖော်ပြခြင်းရှိမရှိ စောင့်ကြည့်အရေးယူမည်">
ကုန်ပစ္စည်းများတွင် မြန်မာဘာသာဖြင့် ဖော်ပြခြင်းရှိမရှိ စောင့်ကြည့်အရေးယူမည်
ဈေးကွက်အတွင်း ဖြန့်ချိရောင်းချမည့် ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပကုန်စည်များတွင် သုံးစွဲမှုနှင့်ပတ်သက်သော အညွှန်းနှင့် အချက်အလက်များကို မြန်မာဘာသာဖြင့် ဧပြီလ ၂၆ ရက်နေ့မှစတင်၍ ဖော်ပြရန်ထုတ်ပြန်ထားရာ ဖော်ပြခြင်း ရှိမရှိကို ယင်းနေ့မှစ၍ ဈေးကွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့က စောင့်ကြည့်အရေးယူမည် ဖြစ်ကြောင်း မန္တလေးတိုင်းစားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာန လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး ဒေါ်ခင်မြင့်မြင့်သန်းက ပြောကြားသည်။
<img src="https://4.bp.blogspot.com/-cfqUmdRHnl4/XGzrKjJFhlI/AAAAAAABtLo/QCCGaRsztNsDV98aBMlOe-gjyzt4JBfhACLcBGAs/w1200-h630-p-k-no-nu/d5.jpg" alt="ပိုက်ဆံမပေးရင်နေ ပြက်လုံးတွေ ပြက်ချင်သေးတယ်ဆိုတဲ့ ဦးမန်းဝင်း">
ပိုက်ဆံမပေးရင်နေ ပြက်လုံးတွေ ပြက်ချင်သေးတယ်ဆိုတဲ့ ဦးမန်းဝင်း
<img src="https://3.bp.blogspot.com/-67BfmpN3cwA/XGzvYjEYrII/AAAAAAAB-ek/XZmYSGKeb3oBJfJkyFmqYTG8eofcE0yhACLcBGAs/w1200-h630-p-k-no-nu/3d479faba96352161c79a8256c4e97a3.jpg" alt="အသက် (၇၃)နှစ်ဖြစ်ပေမယ့် ဆယ်တန်းဖြေဖို့ ဇွဲမလျော့သူ မန္တလေးက ဦးစိုင်းအောင်ညွန့်">
အသက် (၇၃)နှစ်ဖြစ်ပေမယ့် ဆယ်တန်းဖြေဖို့ ဇွဲမလျော့သူ မန္တလေးက ဦးစိုင်းအောင်ညွန့်
<img src="https://3.bp.blogspot.com/-UJ54DeUKeWU/XGzyskg4DTI/AAAAAAABtMA/o4ZE85V_7r8YiDjW4LmOz800XZbqpA__wCLcBGAs/w1200-h630-p-k-no-nu/10.jpg" alt="၅ နှစ် အရစ်ကျ ကားဝယ်ရင် (၅) နှစ်ပြည့်ပြီးပြန်ရောင်းရင် ဘယ်လောက်ရှံးမလဲ?">
၅ နှစ် အရစ်ကျ ကားဝယ်ရင် (၅) နှစ်ပြည့်ပြီးပြန်ရောင်းရင် ဘယ်လောက်ရှံးမလဲ?
<img src="https://2.bp.blogspot.com/-2VhBcePOEJo/XGzo5gTHEKI/AAAAAAABtLI/5ppFHHGzrhIrgpaC8rjIXkZ6Jq5oUMHkwCLcBGAs/w1200-h630-p-k-no-nu/d1.jpg" alt="ကိုယ့်သားသမီးတွေ LGBT လုပ်ချင်ရင် တားပိုင်ခွင့်မရှိဘူးလို့ ပြောလာတဲ့ ပြေတီဦး">